၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့ အယ်ဒီတာအာဘော် (ဆောင်းပါး) | မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ
၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့ အယ်ဒီတာအာဘော် (ဆောင်းပါး)
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-A woman in Southern Shan receiving non-food items distributed by UNHCR.
ဓာတ်ပုံ - © 2021 / Relief International
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဖေးမကူညီလျက်ရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းတစ်ရပ်လုံး ယခင်ကထက် စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ပိုမိုလိုအပ်
နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့တွင် နိုင်ငံတကာလူမှုအသိုင်းအဝန်းများသည် မိမိတို့နေရပ်အိုးအိမ်မှ အတင်းအကြပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများနှင့် ၎င်းတို့အားဝိုင်းဝန်းကူညီလျက်ရှိသည့် လူမှုအသိုက်အ၀န်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းတို့ကိုချီးကျုးဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အတူတကွ ကြိုဆိုဆင်နွှဲလေ့ရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (UNHCR)မှ ကျွန်မအပါအဝင် ကျွန်မ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေဖြင့် ယခုအခါသမယသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကို ကူညီထောက်ပံ့ရာတွင် ကျွန်မတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ထပ်မံ အတည်ပြုရန်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများပိုမိုများပြားလာချိန်တွင် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိခြင်းကို ယခင်ကထက်ပိုမို၍လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ပကတိဖြစ်ရပ်များကို သတိမူရမည် ဖြစ်သည်။ နဂိုရှိရင်းစွဲ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံရသော လူဦးရေအပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ထောင်ပေါင်း များစွာသော နေရပ်စွန့်ခွာသူများတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လျက်ရှိရာ ကုလသမဂ္ဂ၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှုနှုန်း မှာ များမကြာမီကာလကာလအတွင်း မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထောင်သောင်းချီသော လူများသည် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကဲ့သို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရရှိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေ စဥ်တွင် အများစုမှာပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူများ (IDPs) အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါနေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့သည် များစွာသောစိန်ခေါ်မှုတို့ဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလျက် ရှိသည်။မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများ၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ၊ ဘဏ်စနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတို့တွင် ထိခိုက်မှုများရှိလာ၍ ထိခိုက်လွယ်သူ ဦးရေ မြှင့်တက်လာစဥ်တွင် အခြေအနေများပိုမိုယိုယွင်းလာမှုကို ဦးတည်လျက်ရှိသည်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ သည် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရာရှာဖွေရရှိနိုင်ရန် နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများ ရရှိစေရန် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများဖြစ်စေသည်။
သို့တိုင်များစွာဒုက္ခအခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသော်လည်း မယုံကြည်နိုင်လောက်သော စိတ်ခွန်အားက ရှင်သန်ရပ်တည်မှုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ မြန်မာလူမျိုးများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲများကို ပုံမှန်အမြဲမပြတ်သိရှိနေရသော်လည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း၏နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်နေသည့် သတ္တိရှိမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရည်ရှိမှုအစရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြမှုနည်းပါးလျက်ရှိသည်။
ကြင်နာမှုနှင့် စိတ်သဒ္ဒါတရားထက်သန်မှုသည် ပေါကြွယ်ဝလျက်ရှိသည်။ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေရန် ကျွန်မနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသွားရောက်သည့်အခါတိုင်း နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည် ၎င်းတို့လိုအပ်သည့် အရာကိုသာ ယူဆောင်လေ့ပြီး ပို၍လိုအပ်နေသူများထံ ပေးအပ်ရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အများစုမှာ ပဋိပက္ခအတွင်းနေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများ၊ ဝေးလံသော အရပ်မှခရီးရှည်နှင်ပြီး ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသူများအပြင် တစ်ခါတစ်ရံ မိသားစုဆုံးရှုံး ခဲ့သူများဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုကဲ့သိုအင်မတန်လှပသော စာနာမှု၊ဂရုဏာထားရှိကြမှုကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်-Ms. Hai Kyung Jun (pictured with white mask) duringamission to Rakhine State with UNHCR Staff, in discussion with people from affected communities.
ဓာတ်ပုံ - © 2022 / UNHCR Myanmar
UNHCR၏ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် လူသားချင်း စာနာမှုအသိုက်အဝန်း၏ စုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ IDPs များ၏ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အထင်ကြီးလေးစားရသကဲ့သို့ ၎င်းတို့အား ဖေးမကူညီလျက်ရှိသော ခိုလှုံရာ ဒေသမှကျေးရွာလူမှုအသိုင်းအဝန်း နှင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ဆောင်ရွက်ချက်တို့သည် ဦးဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအဖြစ် များစွာစံနမူနာယူဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ရပ်ကွက်ခန်းမများနှင့် သူစိမ်းအိမ်များတွင်ပင် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများကို နွေးထွေးသောနှလုံးသားဖြင့် တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုကြသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ခိုလှုံရာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၀မ်းသာ ကြည်နူးမိပါသည်။
UNHCR မှ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီသည် ပဋိပက္ခကြောင့်နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရသူများအားကူညီပေးနေသည့် အကြင်နာ တရားဖြင့်ပြည့်စုံသည့်လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းများနှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ဦးချင်းစီမှ လုပ်ဆောင်နေသည့် အရာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံမျှသာဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြပါသည်။ အတူတကွဆက်လက် ရပ်တည်သွား ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း အသက်တမျှအရေးပါသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကိုပေးအပ်နိုင်ရန်အချိန်နှင့်အမျှဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် တနှစ်အတွင်းမှာပင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ စောင်များ၊ ဖျာများနှင့်ဆိုလာမိုးအိမ်များအပြင် အခြားပစ္စည်းများ ပါ၀င်သည့် အဓိကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများအား လူပေါင်း ၁၈၂,၀၀၀ဦးအားပံ့ပိုးကူညီ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ နေအိမ်အမိုးအကာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကြောင့်လည်း လူပေါင်း ၁၁၃,၀၀၀ဦးအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ပထမခြောက်လတာကာလအတွင်း အခြားသောလူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ဦးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ကြိုးပမ်းမှုတွေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း ဆက်လက်၍လုပ်ဆောင်ရန် များစွာကျန်ရှိနေသေး သည်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အလိုအပ်ဆုံးသူများထံ အကူအညီများ ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သွားလာရေး ကန့်သတ်ချက် များ နှင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေအစရှိသောအခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အစားအစာရိက္ခာ၊ သန့်ရှင်းသောရေရရှိမှု၊ အမိုးအကာများ နှင့် ဆေးဝါးများပြတ်လပ်လျက်ရှိသော ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသများနှင့် သွားလာ‌ရေးခက်ခဲသောနေရာဒေသများသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသေးသည်။
လူတိုင်းတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအား ရှာဖွေပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လူတိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက် များ လက်လှမ်းမီအသေအချာရရှိစေခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ စုပေါင်းတာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့နှင့်အတူ အခြားသောကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအားလုံး အတူပူးပေါင်း၍ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို အခက်အခဲမရှိရောက်ရှိနိုင်ရေး နှင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှကျန်ရစ်ခြင်းမရှိစေဘဲ ကောင်းစွာလက်ခံရရှိစေရန် အကြံပြုဆွေးနွေးမှုများကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်သည် ယင်းနေရာတွင် အဆုံးသတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေမှ လွတ်မြောက် သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်း နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ လုံခြုံမှု၊ လေးစားသမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ ဆက်လက်ခံစားမှုရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် အသေချာပင်လိုအပ်ပါသည်။ ပဋိပက္ခ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့ခံစားနေရသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းသည် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု ကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ပြသနာအခက်အခဲများရှိလာခဲ့ပြီး သူတို့၏ထိခိုက်လွယ်မှု အခြေအနေများဟာ လည်း တိုးပွားလာလျက်ရှိ၍ မရောမသေချာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် အင်းအားလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုမြှင့်တင်သောအစီအစဉ်များ အားကောင်းစေ ခြင်းမှာလည်း လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ပို၍အရေးကြီးလျက်ရှိလာသည်။
ဤနည်းလမ်းများတွင် UNHCR သည် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၊ နေရပ်ပြန်သူများနှင့် ခိုလှုံမှုကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသူ ကျေးရွာလူမှုအသိုင်းအဝန်းများအား ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုခံနိုင်စွမ်းအား ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ပုံဖော်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ထံအရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့သည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းရှိ အတင်းအကြပ်နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း နှင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ လိုအပ်နေသူများထံ အကူအညီများပေးအပ်ရန် ဤနေရာတွင်အမြဲရှိနေပါမည်။
Hai Kyung Jun သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ UNHCR ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။